SomaliTalk.com » Xulashada Jimcaha : Ka Fikir Soomaaliya oo la hoosgeynayo IGAD 2016
Xulashada Jimcaha, waxaan aalaaba ku soo qaadannaa qoraallo iyo qodobbo xiiso leh. Toddobaadkan waxaan akhristeyaashayada la wadaageynaa qoraal uu diyaariyay Danjire Maxamed Cumar Cusmaan (AHN) oo ka mid ahaa aqoonyahannada Soomaaliyeed kuwoodii ugu qiimaha, aqoonta iyo waayo-aragnimda badnaa. Danjire Maxamed (AHN), wuxuu muddo dheer u shaqeeyay ummadda Soomaaliyeed oo uu uga tagay dhaxal wax ku ool ah, waxaana lagu xusuusan doonaa, daacadnimadiisii iyo dal iyo dad jacaylkiisii.
sawirkan muujinaya calanka itoobiya oo laga weynaysiiyey kan soomaaliya waa soo dhaweyntii iyo caleemo saarkii baydhabo loogu sameeyey dawlad goboleedka KMG ee Koonfur galbeed oo uu ka qayb galay madaxweynaha DFS. Ufiirso calanka Soomaalida waxaa sida oo salaanta ku qaadaya waa Itoobiyaan.
FG: sawirada sare waxaa faafiyey raadiyaha ku hadla codka DFS http://radiomuqdisho.net/wp-content/uploads/2014/12/DSC09582.jpg
Somalitalk waxay idiin soo gudbineysaa mid ka mid ah qoraalladii ugu dambeeyay ee Danjiraha (AHN), qoraalkaas oo uu cinwaan uga dhigay: KA FIKIR : SOOMAALIYA OO LA HOOS GALIYAY WASAAYADDA IGAD 2016, waa mid xambaarsan dareen iyo digniin ay mudantahay in ay dadka Soomaaliyeed ku baraarugaan. Waa kan qoraalkii ee akhris wanaagsan
KA FIKIR: SOOMAALIYA OO LA HOOS GELIYAy WASAAYADDA IGAD 2016
KA FIKIR: SOOMAALIYA OO
LA HOOS GELIYAY WASAAYADDA IGAD 2016
MUQDISHO – “Halane, No Go Zone”, September 2016 –
Qoraalka aad aqrinaysid qaar waa wax jira, qaarna waa wax mala awaal ah, kuna saabsan waxa dhici kara, marka ay dhammaato muddada jiritaanka Maamulka Federaalka iyo muddadii xafiiska loo doortay Maxadweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, haddii la qaban waayay doorashadii la ballan qaaday. Marna maku fikirnay?
Hal shey si hubaal ah aan u qadano. Qorshaha uu ururka Midowga Afrika hoosta ka wado, asigoo dahsoon, ayna taageeraayaan Qaramada Midoobay iyo Beesha Caalamka, waa diyaar in la hirgeliyo. Waxaa muuqda in Midowga Afrika uusan gacmaha ka laaban doonin in Soomaaliya ay meel eber ah ku dhacdo, haddii dawladda Federaalka ee hadda jirta ay ku fashilanto in ay qabato doorasho xur ah sannadka 2016: Waa sabab loo raadinaayo sidii loo fulin lahay mashruuca la wareegidda awoodda Soomaaliya.
Ilaa hadda ma jiraan wax tilmaamayo waxa dhici kara, haddii dawlad la’aan dhacdo. Hase yeeshee, sida degdegga ah uu Ururka Midowga Afrika ugu soo daldalaayo dalka Soomaaliya ciidan iyo qalab fara badan waxay bixinaayaan fikrad ah in la damacsan yahay in Ururka u isticmaalo hirgelinta qorshe aan weli la soo bandhigin ee ma aha kali ah wax loo isticmaalaayo sugitaanka ammaanka Dawladda iyo ka hor-tagga weerarrada mucaaradka.
Soomaalida ma fahamsana in madaxbanaanidii iyo dawlad-nimadii ay faraha ka baxeen. Wadaninimadiina ay beddeshay Qabyaalad.
Mashruuca wuxuu ku saabsan yahay in Soomaaliya laga dhigo Yaxaas (Shark) oo aan ilko lahayn oo siyaasad, dhaqaale iyo ciidan ahaan, waxba tari karin, si Badweynta Hindiya u noqoto waddo adduunka oo dhan mari karo iyo Geesta Afrika (Soomaaliya) oo la hoos geliyo Wasaayadda IGAD.
Waxaa jira Fikrad kale oo ay qabaan dalalka qaarkood oo ah in Soomaalidu ayan is xukumi karin. Sidaas darteed, ay wanaagsan tahay in loo qaybiyo laba gobol, mid la siiyo Ethiopia, mid kalena la siiyo Kenya.
Wakiilo sar-sare oo ka kala socday Beesha Caalamka waa oggolaadeen mashruuca Midowga Afrika. Ilaa hadda IGAD waxay wadaa in awooddeeda ay ku baahisay dalka Soomaaliya oo dhan.
Siyaasiyiinta Soomaalida waxaa la moodaa in ay ka war haynin hadallada la isla dhex maraayo oo sheegaayo in la rabo in lala wareego dalka. Mar haddii uu Baarlamaanka jiri doono, xitaa haddii magac kale lahaado oo ah “Golaha Degaanka” oo dawlad hoosaadna jiri doonto, ciddii maamulayso ha maamusho.
Dawlad goboleedyada dalka Soomaaliya waxaa loo diray ciidanka Militariga iyo ciidanka booliska si ay u sugaan nabadda, haddii ay dhacaan iska hor-imaad lama filaan ah, inkastoo war ku saabsan dhaqdhaqaaq aan caadi ahayn ama hadallo ku-tiri-ku-teen ah la soo sheegin. Qaar ka mid dadweynaha deggan magaaladda Muqdishu mar hore ayay seexdeen, inkastoo qaar ay weli TVga ama Raadiaha naftooda ku maawelinayaan si ay waqtiga habeenka oo dheer isku ilowsiiyaan.
Waxaan ula jeedaa dalkii loo yaqiinnay Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ka dhalatay midowga dhulkii Soomaalida ee Ingiriisku haystay iyo dhulkii uu haysan jiray Taliyaaniga 1960, kaddib markii, nassiib darro, xubinnimadii Qaramada Midoobay laga joojiyay oo la hoos galiyay Wasaayadda ururka IGAD laga bilaabo maanta September 16, 2016.
Sidaad la socotaan, Jamhuuriyadda Soomaaliyeed, waxay ahayd maamul dhexe la’aan, kaddib markii ay dawladdii jirtay burburtay 1991, kooxo kala duwan oo ka soo horjeeday dawladda, ayaa ku guul darreystay in ay keenaan nabad iyo dib-u-heshiisiin. Dagalkii sokeeyee oo ka dhacay dalka boqollaal qof oo ay ka mid yihiin carruur, dumar iyo waayeel, iyadoo la burburiyay hanti maguurto ah oo lahaayeen dadweyne iyo dawlad,lana bara-kiciyay boqolaallo dad Soomaali ah.
Anigoo ku hadlaayo magaca Midowga Afrika, Waxaan tacsi u diraayaa qoysaskii ay geeriyoodeen dadkii ay jeclayeen labaatankii sano ay ka socdeen dalka Soomaaliya dagaallada sokeeye.
Waxaan caawa halkaan u joognaa in aan idiin sheegno in 25 sano ka badan Beesha Caalamka uu garabkiinna joogay, hiil iyo hooba idinkuga taageeray, dalka Soomaaliya gudahiisa ama dibaddiisa iyo xitaa dalalka deriska idinla ah, halkaas oo ay ku sugan yihiin dad tiro badan oo xaqooti Soomaali ah. Waxaan jeclaan lahayn, annagoo wada jir ah in aan nabad gaarsiiyo dalka oo dhan.
Markii aad ka fullin weydeen ballankii aad qaaddeen in aad doorasho sameysaan 2016, Beesha Caalamka waa ay ka qalbi jabeen Dawladda Federaalka, lacagtii loo soo diri jiray Dawladda Federaalka, hadda wixii ka dambeeya waxaa toos loogu diraayaa Maamulka Wasaayadda Soomaaliya ee IGAD.
Iyadoo 20 sano ka badan ay maqan tahay maamul dhexe, shacabka Soomaaliyeed doorasho ayuu gali lahay 2016 si uu u doorto dawlad aan “Ku-meel Gaar” ahayn. Hase yeeshee waa lagu fashilmay.
Rajadayna ugu dambeysay wuxuu ahaa in Dawladda ay ballanqaaday in ay xididdaha u siibaayso musuqmaasuq iyo ku takrifalasho dhaqaale, hase yeeshee, ayidii lafteeda ayaa lagu cambaareyay in ay gashay “tirada kowaad” ee musuqmaasuqa adduunka. Haddii wax yar ay intaas dhaami lahayd geesinimo gelin ayay u ahaan lahayd Beesha Caalamka iyo shacabka Soomaaliyeed.
Taasi waxay ahayd khudbaddii uu u jeediyay Guddoomiyaha Midowga Afrika kulan kooban oo ay ka soo qaybgaleen dad la soo xulay oo magac ku leh qaaradda Afrika, Beesha Caalamka iyo Qaramada Midoobay oo isugu yimid Muqdishu, xerada loo yaqaan “Lama Galaan” si ay uga qayb qaataan xafladda uu Midowga Afrika ku qabsaday dalka Soomaaaliya. (Khudbadda anigaa qoray, waa khiyaali)
Madaxdii Soomaalida madaama ay noqdeen dad xabbisan oo kale, waxaa qolal laga siiyay hoteelka xerada Xalane ee “Lama Galaan”.
Sheekadaas waxay ahayd khiyaal (fiction) oo aniga abuuray, hase yeeshee, waxaan aaminsanahay in haddii labada sano soo socda gudahooda, Soomaaliya sidaas aan waxba iska beddelin, waxa hadda fiction-ka (mala-awaalka) ah fact (dhab) noqon doono.